Nosamborina indray ilay bilaogera Maraokana sady mpihira Rap El-Haqed · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Avrily 2019 5:03 GMT
Mouad niteny tao amin'ny Fihaonan'ny Bilaogera Arabo 2014 tany Amman, Jordania. Sarin'i Hisham Almiraat.
Nandray anjara tamin'ny fitantarana ity lahatsoratra ity i Hisham Almiraat sy Zineb Belmkaddem.
Nosamborina tamin'ny 18 May 2014 tao Casablanca ilay bilaogera Maraokana sady mpihira rap Mouad Belrhouat, fantatra ihany koa amin'ny anarana hoe El-Haqed (“ireo tezitra”). Najanona sy notadiavin'ny mpitandro filaminana i Mouad tao amin'ny fidiran'ny kianja filalaovana baolina kitra izay nokasainy hatrehana. Araka ny filazan'ireo namana nanatri-maso ny zava-nitranga, nahafantatra an'i Mouad ny polisy ary nikendry azy manokana. Nilaza ny manampahefana iray taminy fa “misy raharaha ilainy azy.” Nisy ny fifamaliana nony avy eo ary nosamborina izy taoriana kelin'izay.
Nanadihady an'i Hamza Belrhouat, rahalahin'i Mouad ilay mpikatroka sady naman'ny vondrona, Zineb Belmkaddem taorian'ny fisamborana. Nitatitra ny tenin'i Hamza izy tao amin'ny bilaoginy, :
Toy ny hoe efa nomanina ilay izy, toy ny efa niomana ny hanafika an-kerisetra anay izy ireo tamin'ny voalohany, nisambotra anay, naka ny fanananay, nidaroka anay, ary nitazona an'i Mouad tany am-ponja…. Noratrain'izy ireo mafy ny tànany, hitako ny ratra … nisarika anay ho any anatin'ny iray tamin'ireo fiaran'ny polisy miloko manga ireny izy ireo ary mbola nidaroka anay hatrany. Mangidy fara hatrany ny fiafarany. Nanompa anay ry zareo ary nidaroka anay nandritra ny adiny dimy nandritra ny famotopotorana. Tena mahamenatra izany. Nalain'izy ireo ny smartfinday, ary nitondra anay tany amin'ny fahadimy ambin'ny folo (anaran'ny iray amin'ireo tobin'ny polisy ao Casablanca) izy ireo. Notazonin'izy ireo ny fananako, navelany handeha aho, ary notazoniny sy nohidiny kosa i Mouad .
Ity no farany indrindra tamin'ireo fikasana samihafa avy amin'ny manampahefana Maraokana hampanginana ilay mpihira rap 27 taona tamin'ny fotoana nivoahan'ny lahatsoratra. Mouad izay fantatra amin'ireo tononkirany ara-politika mampiady hevitra dia nanjary mpitarika malaza tao amin'ny fihetsiketsehan'ny mpanohana ny demokrasia tamin'ny volana Febroary 20 Febroary 2011 tao Maraoka. Nosamborina izy ny volana Septambra tamin'io taona io noho ny fiampangana tsy marina momba ny fikatrohana politika ary nigadra efa-bolana. Tamin'ny taona 2012, nosamborina indray izy ary voaheloka ho naniratsira ny fitondrana izay fiampangana mifototra amin'ny hirany malaza “Dogs of the State”, izay nampitàhany ny polisy tamin'ny alika.
Tamin'ny volana Febroary 2014, nosakanan'ny manampahefana ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety izay nokasain'i Mouad sy ireo mpanohana azy atao tany Casablanca mba hamoahana ny rakikirany vaovao, Walou.
Tamin'ity indray mitoraka ity, mbola tsy voampanga i Mouad. Nitatitra momba ny fiampangana niadian-kevitra ny tranokalam-baovao tao an-toerana H24 fa nikasa hividy tapakila lalao tany amin'ny varomaizina izy, raha nitatitra kosa ny gazety mpanala azy tao an-toerana fa voampanga tsy ara-dalàna izy noho ny hamamoana. Tsy hita soritra ho mamo i Mouad ato anatin'ity lahatsary eto ambany ity izay nalain'ireo namany .
Nijanona tany amin'ny paositry ny polisy izy, niandry ny fitsarana azy izay nokasaina hatao ny 22 May 2014.
Tamin'ny fiafaràny ny lahatsorany, nisaintsaina momba ny anton'ny fisamborana ireo mpikatroka politika ao Maraoka i Belmkaddem :
Matanjaka i Mouad. Mihaino sy mitantara izay zarainy ny tanora, ary miezaka ny tsy hitazona olona any am-ponja mandritra ny fotoana maharitra ela ny makhzen [fitondrana]. Ampiasaina tsindraindray hahazoana tombony tsindraindray ny paika fanairana sy famoahana amin'ny lohatenin-gazety hoe “Mpikatroka noafahana”. Saingy voina izany ho an'ireo mpikatroka mbola miaina amin'ity nofy ratsy ity hatrany ao anatin'ny fotoana tsy ampoizina sy tazonina tsy ara-drariny. Ny fikasana hanapotika ny fiainana sy hanakombom-bava ny olona tsy haneho hevitra ao anatin'ny fotoana tsy ampoizina no paikadin'ny fitondrana … sy ny sazy tsy rariny miaraka amin'izany.